Italy zvakare iri panjodzi yekutapukirwa nyowani sezvo maItaly vachienda kunze kwenyika kune Isita
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Itari » Italy zvakare iri panjodzi yekutapukirwa nyowani sezvo maItaly vachienda kunze kwenyika kune Isita
MuItaly, vagari vanobva ku "red zone" havagone kusiya matunhu avo kuzororo reIsita, asi vanogona kuenda kuCanary Islands kuSpain. Zvinogona kutaridza kusanzwisisika uye kupokana, asi ndozvazviri.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti vagari veItari munzvimbo dzvuku havagone kusiya nharaunda yavo, vanogona kukwira ndege voenda kunze kwenyika
Chiedza chegirini chakapihwa chekufamba kuenda kuCanary Islands, saka maItaly anokwanisa kuungana kuIsita ikoko.
Vashandi vekushanya nemasangano vari kuda kuziva kuti sei pasina zororo kumba?
Denderedzwa kubva kuInterior Ministry rakasimbiswa nekupindura zvakanaka kumubvunzo wakabvunzwa naAtoi Confindustria Viaggi, mubatanidzwa unomiririra pamusoro pe90 muzana yemusika wekushanya muItaly, zvine chekuita nemukana wekubvumidza munzvimbo dziripo zvino pasi pezvirambidzo, iyo kufamba kwevafambi vane chinangwa chekuenda kune imwe nyika yakavhurika uye "inoshandiswa" pakushanya.
Vamwe vashanyi vekushanya vakatora aya anonzi "COVID-akaedzwa" makoridho - protocol inobvumidza chete avo vanoongorora zvisina kunaka kune molecular swab vakaita kanenge maawa makumi maviri nemaviri vasati vakwira kuenda. Vamwe vashandisi vanotopa mupiro wezvehupfumi kuita swab kana kusanganisira mutengo mumutengo wepakeji mukuwedzera kune mutengo wechiremba anosangana nevashanyi asati adzoka.
Kupfupisa, kune makoridho evashanyi akachengeteka anovimbisa kune rumwe rutivi kuchengetedzeka kwevafambi uye kune rimwe divi, kutanga kwechikamu chakakosha chehupfumi.
Chiedza chegreen chekufamba kuenda kuCanary Islands kwakakonzera kuratidzira kubva kuhotera dzeItari, inomiririrwa neFederalberghi neConfindustria Alberghi, ichitaura kuti hurumende yatora zvisina tsarukano. matanho ezororo reIsita, iko kureva kuranga zvikamu zvekugamuchira vaeni muItari.
Kuratidzira kwevashandi vekushanya nemasangano evatengesi, pamwe nevagari, vanoshamiswa nerusununguko rwekuenda kunze kwenyika nepo mahotera nehurongwa hwese hwekugamuchira vaItaly hwakamiswa kwemwedzi nekuda kwekurambidzwa kufamba kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Kufunga kwekuita kuti zvikwanise kupa mvumo nzendo dzekuyambuka muganho panguva imwechete ichidzivirira kufamba muItaly haisi kunyoresa.
"Vanhu vakabaiwa majekiseni kana vasina swabs vari panjodzi yakaderera yekutapukira, saka pfungwa iyi inofanira kushandiswa mukuenda kuItari, kutora mukana wezvese zvekushanya zvinosanganisira spas, skiing, misangano, makongiresi, uye mabiko ekutengeserana," akatinhira Mutungamiri yenyika Federalberghi, Bernabò Bocca. Mutungamiri arikunyaradza kupa gakava kune rimwe divi iro ratove nekuparadzaniswa kusina musoro.
Canary Islands Isita Jerimani utano Itari
France inowedzera matunhu COVID-19 matanho ekuvhara nyika yese
Emirates inotangazve transatlantic yekubatana pakati peMilan neNew York JFK
Wedzera Zvimwe Zvinonhuwira kuHupenyu Hwako paSandals Grenada Resort